AKHRISO:- Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Saxiixay xeerka isgarsiinta dalka – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaAKHRISO:- Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Saxiixay xeerka isgarsiinta dalka
Hiiraan Xog, Oct 02, 2017:- Munaasabada ka dhacday maanta xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaalia oo ay ka soo qayb galeen Hey’adaha dowliga ah iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ayuu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ku saxiixay sharciga isgaarsiinta qaranka.
Xafladda waxaa goobjoog ka ahaa Ra’iisul wasaare ku-xigeenka Mudane Mahdi Maxamuud Guuleed ( Khader) , Guddoomiyaha aqalka Sare Cabdi Xaashi iyo wasiirro uu ka mid yahay wasiirka Boostada iyo isgaarsiinta Eng. Cabdi Canshuur Xasan.
Sharciga waxaa horay u soo dooday isla markaana soo meer-mariyay golaha wasiirada iyo labada aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya, Saxiixa madaxweynaha kadib waxaa xigi-doono in lagu soo daabaco Warbaahinta rasmiga ah ee dowladda.
Muxuu madaxweyne Farmaajo ka yiri sharcigan?
“Waxaa mahadleh Allah oo noo sahlay inaan halkaan ku saxiixno sharcigaan.
“Waxaan qiraya dadaalkii Dowladihii hore iyo Baarlamanadii hore ay ka geysteen hir galinta sharcigaan.
“Waxaan marqaati ka nahay dadaalka labadda Aqal iyo sida hufnaanta leh ee ay arintaan gacan uga geysteen.
“Waxaan u mahad celinaya wasaaradda boostadda oo dadaal badan galisay sharcigaan, Maanta waa maalin taariiqi ah ,waxaan sharcigaan galinay waqti badan Dowladd ahaan.
“Waxaan ka baranay wixii nasoo maray inaan qofna lagu faro galin shaqadiisa,sidaad aragteen waxaan magacaabay xukuumad shaqadeedana kuma faro galiyo oo korbaan kala socdaa.
“Waxaan u mahadcelinaya ra’iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa sidda hufan ee ay u wada shaqeeyaan iyo waliba sida ay ula falgalaan labadda aqal.
“Dowlad kasta oo aduunka ka jirta dhib ayaa heysta, tusaale qolo Turki ah ayaa jimcihii ii yimid waxaa ay hal saac iiga sheekeynayeen dhibaatadda dalkooda ka jirta, markii aan dhageystay waxaanba ka xishooday inaan dhibaatadda dalkeena uga waramo.
“Xukuumadu si fiican ayey u shaqeyneysa oo hufan laakiin waxaa qiraya iney caqabado jiraan laakiin dhibaatooyinka guud ee na heysta hal habeen laguma xalin karo.
“Midnimaddu waa muhiim waana inuu u istaagaa qof walba oo Soomaali ah, waa inaan isku duubnaana si caalamku noo taageero, waxaan ku baaqaya in maamul goboleedyadda iyo Dowladda dhexe ay midnimo muujiyaan, sidoo kale ganacsatada iyo ururadda bulshadda iyo Somaliland oo aan hadda ku raad joogno ayaan karbnaa midnimo.
“Waxaan hubaa isku duubnidu iney keeni doonto inaan gaarno meesha aan rabno.
Muxuu Cabdi Xashi Claahi C/laahi (Gudoomiyaha Aqalka sare) sharcigan ka yiri?
“Shircigan waxaa uu wax tar u yahay sadex arimood oo kala ah dhaqalaha, amniga iyo arimaha bulshadda.
“Mushkiladda Somalia waxey tahay, waxaan rabnaa inaan qabiil wax ku dhisno, mana suurtoobeyso.
“Siyaasad qof qalday ma saxo wax lagu qaldayna laguma saxo, carta ilaa hadda qabiil ayaan wax ku wadnaa mana sii socon karto.
“Dowladdo qabiilo ku dhismay waxa aan ku keeneyno ma jirto, mana qarinaayo inuusan dalkaan qaran noqon doonin inta qabiil wax lagu qeybsanaayo.
“Somaali waxaa ay u baahan tahay uursami iyo aruursanan.
“Somaliland waxaa la lee yahay waxa ay rabtaa iney go’ado, laakiin taas waxaa raba shaqsiyaad siyaasiyiin ah laakiin shacabku ma rabaan.
“Dowladda waxaan ka codsaneynaa iney nagu caawiso iney sii socdaan wada hadaladda Somaliland, dadka reer Somaliland ee Xamar jooga uma joogaan dhaqaalo dartiis ee waa midnimo raadis.
Muxuu Eng Cabdi Canshuur Xasan (Wasiirka Boostadda) ka yiri sharcigan?
“Waa Sharcigii ugu horeeyay ee isgarsiineed oo ay yeelato Somalia waana arin lagu farxo.
“Waa Sharcigii ugu horeeyay ee labadda gole saxiixaan.
“Sharcigaan diyaarintiisa iyo howshiisu waxey soo bilaawday 2005tii waxaana soo bilaabay Cali Axmed Jaamac Jangali.
“Sharcigaan waxa laga talo galiyay maamul goboleedyadda iyo shirkadaha isgarsiinta, saxiixa sharcigaan waa bilaawga shaqadda isgaarsiinta qaranka.
“Sharcigaan wuxuu u daneynayaa macaamiisha, wuxuu door ka qaadanaya amniga dalka, waxaa dhaqaale ka heleya Dowladda, waxaana uu horseedaya in la helo kaabayaashii isgaarsiinta Qaranka.
Wasiirku wuxuu u mahadceliyay madaxda sare, maamul goboleedyadda, wasiiradii kasoo shaqqeeyay wasaaradda, ra’iisul wasaaraha ,labadda aqal ee dalka, shirkadaha isgaarsiinta, iyo garyaqaano guud ee Qaranka.
Muxuu Cabdiwali Ibraahim Shiikh Muudey (Gudoomiye ku xigeenka Barlamaanka) ka yiri sharcigan?
“Waxaan u mahad celinaya cid kasta oo kasoo shaqeysay sharcigaan oo muhiim u ah dalka.
“Wax walba oo wada jir looga shaqeeyo waa guuleysanayaan ,wadajir ayaana looga shaqeeya sharcigaan.
“Siyaasadda waa lagu kala aragti duwanaan karaa laakiin dalka qof gaar uleh ma jirto, danta guud aan ka wada shaqeyno.
“Dalkaan cid lagu heleynaayo ma jirto, Farmaajo waa shaqsi barina wuu baxaya , dalkaan cid gaar ah yaan lagu haleynin, wax Soomaalinimo lagu waayay shaqsi shaqsi laguma heli karo.
“Hadii aan waxa hadda socdda wax laga qaban waxaa la gaari doon in dalkaan la qaato oo goob goob loo qaato.